आज सहिद दिवश::KhojOnline.com
आज सहिद दिवश
काठमाडौं । आज सहिद दिवश । विविध कार्यक्रम सहित यो दिवश मनाउने गरिन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक सन्देस जारी गरेका छन् । उनले सन्देसमा सहिदको बलिदानीले लोकतन्त्र र मानवअधिकार विरोधी शक्ति परास्त भएको बताएका छन् ।
उनले १९९७ मा राणाशासन विरुद्ध शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द र गङ्गालाल श्रेष्ठले गरेको बलिदानीले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनप्रति गौरव लाग्ने गरेको बताएका छन् ।
देश र जनताको लागि लड्दा जन गुमाएकाहरुलाई सहिद को परिभाषा दिइएको छ तर नेपालमा यो परिभाषाको अवमूल्यन भइरहेको छ । जनआन्दोलनमा राज्यद्धारा मारिएका पनि सहिद । राज्यको आदेशमा जनता माथी गोली चलाउने सुरक्षाकर्मी पनि सहिद ।
नेपालमा सहिदको परिभाषा नै गोलमटोल छ । जनयुद्धमा राज्यद्धारा मारिएकालाई सहिद घोषणा गर्न हिच्किचाइरहेको राज्यले राज्यको आदेशमा जनतामाथी दमन गर्ने सुरक्षाकर्मीलाई सहिद घोषणा गरेको छ ।
यो सुन्दा जो कोहीलाई पनि लाज लाग्ने विषय हो । गृहमन्त्री नै आफ्नै आदेशमा सफायामा परेका शसस्त्र प्रहरीका कमाण्डर कृष्णमोहन श्रेष्ठको सालिकमा सलामी दिन्छन् ।
काठमाडौंस्थित सहिद गेटमा राजाको सालिक माथी र सहिदको सालिक तल राखिएको छ । के राजा भन्दा सहिदको मूल्य कम छ ? राजा र महाराजाहरुको शासनमा मारिएका सहिदहरुको सालिक किन राजा भन्दा मुनी राखिएको छ ? प्रश्नले गिज्याइरहेको छ ।
जनयुद्धमा भएका घाइते र अपांगहरुको वेवास्ता गर्ने सरकार सुरक्षाकर्मीलाई सहिद घोषणा गर्न किन आतुर ?